यसकारण सिभिल बैंकसँग मर्जहुन चाहन्छ हिमालयन बैंक - Arthatantra.com
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग गर्ने भनिएको मर्जको सम्झौता तोडेपछि नयाँ पार्टनर खोज्न थालेको छ । यस विचमा विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुसँग कुरा भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा विशेषगरी हिमालयन बैंकले बैंक अफ काठमाडौ र सिभिल बैंकसँग मर्जको लागि कुराकानी अगाडी बढाएको छ । तर सवैभन्दा बढी सम्भावना भने सिभिल बैंकसँग रहेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए ।
बैंकको सेयर संरचना हेर्दा पनि हिमालयन बैैंकले सिभिल बैंकसँग मर्ज हुने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
हिमालयन बैंकमा सवैभन्दा बढी सेयर सेयर हविव बैंक (२० प्रतिशत) पछि कर्मचारी सञ्चय कोषको १४.८ प्रतिशत रहेको छ । यदी हिमालयन बैैकले बैक अफ काठमाडौसँग बराबरी अनुपातमा मर्ज गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम विपरित कोषको सेयर स्वामित्व हुन पुग्छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको बैंक अफ काठमाडौमा १४.८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । बराबरीको अनुपातमा मर्ज भएमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर २९.६ प्रतिशत हुन पुग्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार कुनैपनि बैंकमा संस्थाको हकमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी सस्थापक सेयर स्वामित्व हुनु हुदैन । यदी डिडिए गर्दा हिमालयन बैंकको १ः२ को अनुपातमा सेयर स्वाप रेसियो निस्कीयो भने पनि कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर स्वामित्व २२.२ पुग्नेछ । तर १ः २ को सेयर अनुपात बैंक अफ काठमाडौले मान्दैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोषकै कारण पनि हिमालय बैंक अफ काठमाडौ रोज्दैन । तर सिभिल बैंक रोज्न सक्ने आधारहरु भने धेरै नै रहेको छ ।
सिभिल बैंकमा हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो सेयर बोकेको कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर स्वामित्व ८.५१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै हिमालय बैंकमा नै रहेका अर्का सेयर धनी राणा समुहको सेयर पनि सिभिल बैंकमा रहेको छ ।
राणा र थापा समुहले सञ्चालक गरेको आभा इन्टरनेसनल लिमिटेडको सिभिल बैंकमा ७३ लाख ५८ हजार ९३८ कित्ता सेयर छ भने राणा समुहको लगानी रहेको विजया इन्टरनेशनल प्रा.लिको १३ लाख २० हजार ९०० कित्ता सेयर रहेको छ ।
सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा मर्ज गराउदा राणा, थापा समुहका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष पनि खुसी हुने देखिन्छ । किनकी लामो समयदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषको आँखा हबिब बैंकको सेयरमा रहेको छ । हिमालयन बैंक छोडेर हबिब फर्कन लागेको छ ।
यदी सिभिल बैंकलाई बढीमा १ः२ को अनुपातमा मर्ज गराउन सकेमा दुवै बैंक गरी कर्मचारी
सञ्चय कोषसँग १९.०५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुन आउछ । जसले गर्दा कोषले हबिब बैंकको पनि बढीमा ६ प्रतिशतसम्म सेयर किन्न सक्छ ।
हुनत यसअघि पनि हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकसँग मर्जको लागि कुराकानी अगाडी नवढाएको होइन । सो समयमा हिमालयन बैंकले सिभिललाई प्रति सेयर ३५ रुपैयाँमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सो कुरामा सहमत भएको सिभिल बैंक पछिल्लो समयमा त्यही अनुपातमा भने मर्जमा जादैन ।
पछिल्लो समयमा सिभिल बैंकको आर्थिक परिसुचक बलियो हुदै गएपछि सोही अनुपातमा भने मर्जमा नजाने निश्चित छ ।
वि.सं.२०७८ माघ ६ बिहीवार १२:३८ मा प्रकाशित
News Views: 2076
अघिल्लाे नबिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पौडेलले लिए सपथ ग्रहण
पछिल्लाे साढे चार अर्बको मौलाकाली केबुलकार निर्माण सुरु, स्थानीयलाई ४९ प्रतिशत सेयर
किन्ने होइन त कालिका लघुवित्तको ५ हजार कित्ता सेयर ?
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार ११:२३
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको...
सहकारी विभागले जारी गर्यो ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन, के-के छन् नयाँ व्यवस्थाहरु ?
वि.सं.२०७९ जेठ १२ बिहीवार १७:१०
काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत...
वि.सं.२०७९ जेठ १२ बिहीवार १६:३८
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले देशका बिभिन्न ठाउँमा जेष्ठ...